ထိုကဲ့သို့သောတိုးတက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံ, ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်, တိုးမြှင့်စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆျောမှု, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုးတက်သို့မဟုတ်သွားပြီအဖြစ်အချိန်အစီရင်ခံစာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်, တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက် porn ကို အသုံးပြု. လည်းငြိမ်းသူမြားစှာတစ်ဦးချင်းစီ, ယုံကြည်မှုတိုးလာ, တိုးတက်လာသောစိတ်ဓါတ်များ, စိတ်ကျရောဂါလျှော့ချသို့မဟုတ်သွားပြီ, လူမှုရေး, ပိုပြီးပြင်းထန်သို့မဟုတ်တက်ကြွစိတ်ခံစားမှုဖြစ် သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒနှင့်မေတ္တာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်တိုးမြှင့်အလိုဆန္ဒ။
ရာနှင့်ချီသောလူပုဂ္ဂိုလ်များအကောင့်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် YBOP မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ -
porn အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု / ယုံကြည်မှု / စိတ်ကျရောဂါအောင်သလဲ?
porn အသုံးပြုမှုကို memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလား?
သူတို့ reboot အဖြစ်လူတွေဘယ်လိုအကျိုးရှိမြင်သနည်း
အချို့လေ့လာမှုများက (၁) ညစ်ညမ်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတို့ကိုလေ့လာသည်။ (၂) porn အသုံးပြုမှုနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုနှစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်။
စာရင်း ၁ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆက်စပ်မှုကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာမှုများ။
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အင်တာနက်-related ပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အပြောင်းအလဲတွေဟာ: ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2004) ၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ဂယက်ရိုက် - ကောက်နှုတ်ချက်:
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုအတွက်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကျောင်းသားများကသူတို့အော့ဖ်လိုင်းဘဝကိုပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပိုမိုချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်သူများသည်အင်တာနက်ကိုပိုမိုမှီခိုခဲ့ကြ နှင့်အနိမ့်အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်.
လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှု (OSA) တွင်ကျောင်းသားများပါ ၀ င်မှုရှိသော်လည်း အင်တာနက်ကိုကယုတ်လျော့လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အန္တရာယ်မှာပေါ်လာပေးဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုအပေါ်မှီခိုသူတွေကို။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အထီးကျန်ခြင်း: တစ်ခုကအသင်းမှ? (2005) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသားများရဲ့ကောင်းပြီ-ခံ (2005) ၏အသုံးပြုမှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အများဆုံးတစ်ဦးချင်းစီ, လုပ်ငန်းခွင်ပညာရေး, အပန်းဖြေခြင်း, စျေးဝယ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပေမယ့်တစ်ဦးသာရှိပြီးအထီးလူနည်းစုကျဘာ compulsive နှင့်များ၏လိုက်စားမှာသူတို့ရဲ့အချိန်, ငွေ, နှင့်စွမ်းအင်တစ်ခုတပ်ပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုမှာ-အန္တရာယ်သုံးစွဲသူများအဖြစ်လူသိများ, တည်ရှိ ဘာအတွေ့အကြုံများ အနုတ်လက္ခဏာ intrapersonal စိတ်ကျရောဂါ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖုံးကွယ်, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောဘဝမိတ်ဖက်နှင့်အတူဝမ်းနည်းရငျးနှီးနှင့်အတူပြဿနာများနှင့်အတူ။
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့နေတဲ့အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း (2005) - ကောက်နှုတ်ချက်:
တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လူငယ်အင်တာနက်လုံခြုံရေးစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များ အသုံးပြု၍ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက် (၁၅၀ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အတွင်း) ၁၅၀၁ ယောက်ကိုကဏ္ofအလိုက်တယ်လီဖုန်းဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်တင်ပြသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရောရိုးရာနည်းလမ်းများ (ဥပမာမဂ္ဂဇင်းများ) ကို အသုံးပြု၍ ဖော်ထုတ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့် ပတ်သက်၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖော်ပြခြင်းခံရသူများသည်အရင်းအမြစ်မသက်ဆိုင်ဘဲပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆိုးသွမ်းသောအပြုအမူများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုပုဒ်မခွဲအရသိသိသာသာပိုမိုများပြားလာနိုင်သည်။။ ထို့ပြင် အော့ဖ်လိုင်းရှာဖွေနေသူနှိုင်းယှဉ်အွန်လိုင်းရှာဖွေနေသူစိတ်ကျရောဂါနှင့်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘွန်း၏အောက်ခြေအဆင့်နဲ့ဆက်စပ်လက်တွေ့ features တွေသတင်းပို့ဖို့ပိုများပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုခြင်း: ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2009) ၏ multivariate ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
Non-ညစ်ညမ်းအင်တာနက်ကို site ကိုအသုံးပြုသူများကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောညစ်ညမ်းအင်တာနက်ကို site ကိုအသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအမူအကျင့်ပြဿနာများရှိသည်ဖို့နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိကြ၏ မကြာခဏညစ်ညမ်းအင်တာနက်ကို site ကိုအသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအမူအကျင့်ပြဿနာများရှိသည်ဖို့သိသိသာသာပိုပြီးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောနှင့်မကြာခဏနှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်းအင်တာနက်ကို site ကိုအသုံးပြုမှုကိုပြံ့နှံ့ဖြစ်ကြပြီးသိသိသာသာလူမှုရေး maladjustment နှင့်ဆက်စပ် ဂရိမြီးကောင်ပေါက်အကြား။
လူမှုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု (2009) - ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှတစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်:
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုသူတို့လျော့နည်းလူမှုရေးရွယ်တူ (Mesch, 2009) ကဲ့သို့လူမှုရေးအပြန်အလှန်မြင့်မားဒီဂရီနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များနှင့် Bond လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလောင်အဖြစ်ဖွယ်ရှိမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် Mesch တွေ့ရှိခဲ့ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပိုမိုပမာဏသိသိသာသာလူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်, အထူးသဘာသာ, ကျောင်း, လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်မိသားစုနှင့်ဆက်စပ်သော။ အဆိုပါ လေ့လာမှုလည်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်မှထုတ်ပြန်သောအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွေ့ ကျောင်းမှာ…။
ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်။ ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက် (2010) ၏တစ်ဦးကလူဦးရေကိုအခြေခံပြီး epidemiological လေ့လာမှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအများအပြားပြဿနာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမြင့်မားမကြာခဏကြည့်ရှုမိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမနှစ်ဦးစလုံးမှ ပို. အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်ကြောင်းတဲ့ပြဿနာအပြုအမူအဖြစ်ထင်ရှားစေခြင်းငှါ နှင့်လည်းလက်တွေ့အင်တာဗျူးအတွက်ဖြေရှင်းခံရဖို့။
"ငါကမှား၏ယုံကြည်ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲလုပ်": နှိုင်းယှဉ်လုပျတဲ့သူဘာသာရေးလုလင်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ညစ်ညမ်း (2010) ကိုမသုံးကြဘူး - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
သင်တန်းသားများကိုအနောက်တိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးဘာသာရေးတက္ကသိုလ်တက် 192 ထွန်းသစ်စ-အရွယ်ရောက်ယောက်ျားအသက်အရွယ် 18-27 ခဲ့ကြသည်။ သူတို့အားလုံးလက်မခံနိုင်ဖြစ်ညစ်ညမ်းယုံကြည်သည်နေစဉ်, သူတို့သည် မသုံးခဲ့ပါ (လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်) ညစ်ညမ်းအစီရင်ခံတင်ပြ (က) အတိတ်၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းများနှင့်မကြာသေးမီတစ်ဦးချင်းဘာသာရေးအလေ့အကျင့်, (ခ) အတိတ်မိသားစုဘာသာရေးအလေ့အကျင့်, (ဂ) ချိန်းတွေ့နှင့်မိသားစုနှင့်စပ်လျဉ်း Self-တန်ဖိုးရှိနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ (ဃ) အနိမ့်အဆင့်ဆင့်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (2011) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုအပြုအမူ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အသက်အပိုင်းအခြားအဘို့အညှိပြီးနောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (SEMB) အသုံးပြုသူများ nonusers နှိုင်းယှဉ်, သာ. ကြီးသောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, အသက်ရှင်ခြင်း၏ဆင်းရဲတဲ့အရည်အသွေးကိုပိုမို mental- နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလျော့ရက်နှင့်အောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကဲခတ်: အင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုဒ်များအလွန်အကျွံ (2011) အသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ Ratings အဖွဲ့နှင့်စိတ်ဓာတ်-စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းက္ပ - လူ့ sensitivity ကို, စိတ်ကျရောဂါ, အကြောက်လွန်ရောဂါတှေးအချေါနှငျ့ psychoticism: တစ် porn စွဲမေးခွန်းလွှာ (IATsex) အပေါ်ရမှတ်များကဲ့သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ကြောင့်ကျဘာများအလွန်အကျွံအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ Self-အစီရင်ခံပြဿနာများစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွေ့ အဆိုပါ IATsex ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုသိသိသာသာ IATsex ရမှတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမပြုခဲ့စဉ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ratings, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုနှင့်အသုံးပြုသောလိင် applications များ၏နံပါတ်, အ IATsex ရမှတ်၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာမှာတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက္ခဏာပြင်းထန်မှု (SCL GSI) အဖြစ် sensitivity ကို, စိတ်ကျရောဂါ, အကြောက်လွန်ရောဂါတှေးအချေါနှငျ့ psychoticism လူ့ခြင်း, IATsex ရမှတ်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။
ဘယ်အချိန်မှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကောလိပ်အထီးများထဲတွင်ပြဿနာကိုကြည့်ရှုခြင်းသလဲ? အတွေ့အကြုံကိုရှောင်ရှား (2012) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ပါ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လက်ရှိလေ့လာမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏ဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာ (စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှု, လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ) 157 ဘွဲ့ကြိုကောလိပ်ယောက်ျား၏ non-လက်တွေ့နမူနာအတူကောက်ယူ cross-section အွန်လိုင်းစစ်တမ်းမှတဆင့်။ ရလဒ်များပိုပြီးကြည့် သာ. ကြီးမြတ်ပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, ကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable ကိုမှသိသိသာသာဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသမီးလိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲများနှင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (2012) - ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသမီးဆိုက်ဘာလိင်စွဲလမ်းသူအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်စွဲလမ်းသူအမျိုးသမီးတွေ၊ ဆိုက်ဘာဆက်နစ်စွဲသူများသည်စိတ်ဓာတ်ကျမှုမြင့်မားသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ဤအ variable တွေကိုတစ်ခုချင်းစီအတွက်, ပုံစံကတော့စွဲ / အဘယ်သူမျှမကျဘာအုပ်စုတစ်စုအတွက်ဘာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူနှင့်သင်တန်းသားများ, သေကြောင်းကြံစိတ်ကျရောဂါကိုခံစားရဖို့ပိုပြီးဖွယ်ရှိခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ် Non-စွဲ / အဘယ်သူမျှမကျဘာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူထက်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်။ အဆိုပါဘာအုပ်စုတွင်သင်တန်းသားများကိုစွဲ / အဘယ်သူမျှမကျဘာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူထက်စိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်ခြင်းသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ Correlate နှင့်ဂို့ပြည်နယ်အတွင်းရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးဆိုင်ရာညှိယူ (2012) အဖြစ်ညစ်ညမ်းစွဲ - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ဂို့ပြည်နယ်အတွင်းရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ငှါရှာကြံလေ၏။ ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ငါးသုတေသနမေးခွန်းများကိုရေးဆွဲပြီးနှစ်ယောက်ယူဆချက် postulated ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုများအတွက်ဘာသာရပ်များဂို့ပြည်နယ်နှစ်ခုတက္ကသိုလ်များမှ 616 အချိန်ပြည့်တတိယနှစ်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားပါဝင်သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ဂို့ပြည်နယ်အတွင်းရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအညစ်ညမ်းစွဲ၏အဆင့်မြင့်ကြုံတွေ့ကြောင်းပြသပါ။ ရလဒ်ကိုလည်းဂို့ပြည်နယ်အတွင်းရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု၏အလယ်အလတ်အဆင့်အထိကြုံတွေ့ကြောင်းပြသပါ။ ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုအကြားသိသိသာသာပေမယ့်အပျက်သဘောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါသည်။ ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုအကြားအနည်းငယ်အပြုသဘောဆက်ဆံရေးဟာရှိပါသည်။
ဟောင်ကောင်အစောပိုင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကြားတွင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏စားသုံးမှု: တစ်ဦးကပွား (2012) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ယေဘုယျအားအပြုသဘောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အောက်ပိုင်းအဆင့်အထိ related ခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုမှအပြုသဘောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မိသားစုအချက်များများ၏ဆွေမျိုးအလှူငွေကိုလည်းစူးစမ်းခဲ့သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားချိတ်ဆက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာ, အပြန်အလှန်, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သဟဇာတသုံးခု features တွေညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမှအဆိုးဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
အရွယ်ရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူထွန်းသစ်စ: ရှက်ကြောက်စိတ်အရေးပါပါသလား (2013) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2013) တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - ကောက်နှုတ်ချက်:
CSB မပါဘဲဖြေဆိုသူနှင့်နှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလက္ခဏာများ, စိတ်ဖိစီးမှု, ဆင်းရဲတဲ့ Self-လေးစားမှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ, compulsive ဝယ်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် kleptomania မြင့်မားမှုနှုန်းမြင့်မားအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
CSB ငယ်ရွယ်လူကြီးများအကြားဘုံသည်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းတဲ့အကွာအဝေးလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (၂၀၁၄) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောနာရီများသည်ပါဝင်သူများ၏ narcissism အဆင့်နှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်အစဉ်အဆက်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဘူးသောသူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဖူးဘူးသောသူထက် narcissism သုံးခုစလုံးအတိုင်းအတာမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ထောက်ခံ။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး (2014) - ယေဘူယျအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိသော Porn ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ကျနော်တို့အနေနဲ့ extramarital ကိစ္စဖူးဖို့ပိုဖွယ်ရှိ, အတိတ်တစ်နှစ်အတွက် X-rated ရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သူလူကြီးများကွာရှင်းခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်များနှင့်သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိ သို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်ခြုံငုံ။ ငါတို့သည်လည်းယောက်ျားအဘို့, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏ကြိမ်နှုန်းအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုလျှော့ချကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆွီဒင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, psychosomatic ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ (2014) - ကောက်နှုတ်ချက်:
လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းအတွက်ခန့်မှန်းသူများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထိုသို့သောအသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းရန်ဖြစ်သည်။ … ..we သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း၊ ကွဲကွာနေသောမိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းတက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းသည်နောက်ဆက်တွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အခြေခံမှာညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအတိုင်းအတာအထိနောက်ဆက်တွဲမှာ psychosomatic လက္ခဏာတွေဟောကိန်းထုတ်.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားလူနေမှုပုံစံနှင့်ကျန်းမာရေး (2014) နဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်၎င်း၏အသင်း၏အသုံးပြုမှု - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါ longitudinal ခုနှစ်တွင်ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုပိုပြီး psychosomatic ရောဂါလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ခဲ့သည်လေ့လာဆန်းစစ် စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆက်ဆံရေး, နှင့်လူငယ်လူကြီးလိင်ကွဲအမျိုးသားများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုရိုမန်းတစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် (2014) - ပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရှောင်ရှားရန်နှင့်စိုးရိမ်ဖွယ်တွယ်တာမှုပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်. ကောက်နုတ်ချက်:
ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယခင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသား ၃၇၃ အကြားအမျိုးသားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကို (ကျားမအခန်းကဏ္ conflict ဆိုင်ရာပconflictိပက္ခနှင့်ပူးတွဲပါပုံစံများ) နှင့်အကျိုးဆက်များ (ဥပမာအားဖြင့်ဆင်းရဲသောဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု) ကိုဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး သာ. ကြီးကျားမအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခပိုမိုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှုစတိုင်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ထင်ရှား, ဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး, နှင့်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် - သော်လည်း Voon et al။ , 2014 အဓိကစိတ်ရောဂါအခြေအနေများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်း, porn စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအကဲဖြတ်အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဘာသာရပ်များရမှတ်စွဲ။ ကောက်နုတ်ချက်:
CSB ဘာသာရပ်များ [porn စွဲ] ပိုမိုမြင့်မားစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရမှတ်ခဲ့ အတွက် (စားပွဲတင် S2 S1 file) ဒါပေမယ့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါ၏အဘယ်သူမျှမကလက်ရှိ diagnoses
Looking, ညာဘက်မှာရှိတဲ့အဘယ်သူမျှမထိခိုက်နစ်နာမှု? ယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု, ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်ကောင်းပြီ-ခံ (2014) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
Path ကို, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုယောက်ျားရဲ့ကြိမ်နှုန်း (က) အပြုသဘော mesomorphic စံပြ၏ International မှတဆင့်သွယ်ဝိုက်ကြွက်သားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီမကျေနပ်မှုချိတ်ဆက်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ, (ခ) အဆိုးခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်မှုမှတဆင့်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ခန္ဓာကိုယ်လေးမွတျဆက်စပ်လေ့လာဆန်းစစ် (ဂ) အပြုသဘောရင်ခုန်စရာ attachment ကိုစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းမှတဆင့်သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်နှင့် (ဃ) အဆိုးအပြုသဘောဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကို attachment စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းမှတဆင့်သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ - လေ့လာမှုတွင်“ hypersexuals” ကို“ နာတာရှည်ဖောက်ပြန်သူများ” နှင့်“ ရှောင်ကြဉ်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများ” (နာတာရှည် porn အသုံးပြုသူများ) ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
အဆိုပါကိုရှောင်ကြဉ်တညျးရာမျိုးကွဲတစ်ပတ်ကိုသူတို့အားတစ်နေ့လျှင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ 1 နာရီထက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနှုန်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ 1 နာရီ (သို့မဟုတ်တဦးတည်းဇာတ်လမ်းတွဲ) ထက် ပို. သတင်းပေးပို့သူကိုအမှုပေါင်း, ဒါမှမဟုတ်7နာရီ (သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များ) ထက် ပို. အဖြစ် operationalized ခဲ့သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် sexological variable တွေကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်တကွ, ရှောင်ရှားရန်တညျးရာမျိုးကွဲ [compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်] သိသိသာသာပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြဿနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများ (71% vs. 31%) ၏သမိုင်းအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့သည် နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အများဆုံးအစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှရိပ်မိစွဲ: တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါနှင့်ကျော်အချိန် (2015) -“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုလျစ်လျူရှုပါ၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ် porn စွဲလမ်းမှုမေးခွန်းပုံစံဖြစ်သော Grubbs's CPUI-9 ၏စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းကိုရိပ်မိ porn စွဲဒဏ်ဍာရီအပြည့်အဝဝေဖန်မှု YBOP) ။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , porn စွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ (အမျက်ဒေါသ, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှု) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ဤလေ့လာမှု၏အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို“ စွဲလမ်းခြင်း” သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ web အသုံးပြုသူများပြားသော Cross-section နမူနာနှင့်ဘွဲ့ကြိုဝက်ဘ်အသုံးပြုသူများကို Cross-sectional နမူနာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ထို့အပြင်၊ ဘွဲ့ကြိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများကို ၁ နှစ်ကြာရှည်စွာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၌၊ ကျနော်တို့ရိပ်မိစွဲနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအကြားဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စုပေါင်းတွေ့ရှိချက်များအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို“ စွဲလမ်းခြင်း” သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သောကရောက်စေခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ပြသည်။
ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူ (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တစ်ခုအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို - porn / လိင်စွဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရကိုကွောကျရှံ့သာဆကျနှယျမဟုတ်ခဲ့, ကလည်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
Hypersexual” အပြုအမူသည်မိမိ၏လိင်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ hypersexual အပြုအမူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ငံတကာမှ ၅၁၀ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောလိင်ကွဲ၊ လိင်ကွဲပြားမှု၊ လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအတွက်အမည်မဖော်လိုသည့်အွန်လိုင်း Self-report questionnaire battery ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အသက်နှင့်လိင်အပြင် (အထီး)၊ hypersexual အပြုအမူအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏အစီအမံ, စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး, ရို Impulse နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှစ်ဦးစလုံး။
အနိမ့်စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီ-ခံခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံလိင်စိတ်ဝင်စားမှုဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Boys တွေထဲမှာလိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း (2015) ၏ compulsive အသုံးပြုခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုခန့်မှန်း - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဒီလေ့လာမှုကသုံးကွဲပြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ domains များ (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား / အပြုအမူနှင့်ထကြွလွယ်သော-စိတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး) မှအကြောင်းရင်းများဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုလက္ခဏာတွေဟောကိန်းထုတ်ရှိမရှိ။ စုံစမ်းစစ်ဆေး longitudinally, စိတ်ကျရောဂါခံစားချက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်, နောက်တဖန်, အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား6လအကြာတွင် compulsive အသုံးပြုမှုလက္ခဏာတွေဆွေမျိုးတိုးခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆက်ဆံရေး, နှင့်လက်တွေ့ဆက်တင် (2016) တွင် Ego-Dystonic တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဇီဝဗေဒဆက်စပ်မှု - မူရင်းစာရွက် (ဒီမှာဘာသာရပ်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြရန်“ Compulsive Masturbation” ဟူသောစကားစုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စာတမ်း၏ထုတ်ဝေသူ (Sexual Medicine Open) က“ Compulsive Masturbation” ကို“ Ego-Dystonic Masturbation” အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ 2016 ခုနှစ်တွင် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, လက်တွေ့အခြေအနေ၌, compulsive ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုအရင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုဖို့စိတ်ရောဂါ comorbidities, အထူးသဖြင့်ခံစားချက်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူလူများအတွက်ချွင်းချက်မဟုတ်ဘဲစိုးမိုးရေးဖြစ်ကြောင်း။ 21, 22, 23, 24 သို့သော် EM non-တိကျတဲ့စိုးရိမ် activation နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသားများရဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ပြဿနာအပြုအမူ (2016) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ညစ်ညမ်းစွဲအစီရင်ခံသူများသည်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများလောင်းကစားများနှင့်ကြည့်ရှုတရားမဝင်ပုံရိပ်တွေနာမတော်ပေမယ့်အနည်းငယ်သုံးပြီးပိုပြီးအလွန်အကျွံသောက်, တိုက်ပွဲများနှင့်လက်နက်အသုံးပြုမှုအပါအဝင်အန္တရာယ်များ antisocial အပြုအမူတွေ, အမျိုးမျိုးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ သူတို့ကအစဆင်းရဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကဖော်ပြခဲ့သည်။
မကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ကိုရီးယားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအချိန်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှု (2016) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ (2016) ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း (IPD) သည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ IPD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလုပ်မဖြစ်သောအသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအချက်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆနိုင်သည်ဟုသီအိုရီအရယူဆခဲ့သည်။ ဒေတာကပြသသည် IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကို, ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းသောခံစားမှုနှင့်အတူအဆိုးဆက်စပ်နိုးနှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူအပြုသဘောတည်ငြိမ်ပြီးခဲ့ကြသည် နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားရှာခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးနိုင်သည်။ ထိုမှတပါး, IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအဆိုးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမီနှင့်အပြီးခံစားချက်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။
ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လက်တွေ့အပြုအမူများနှင့် neurocognitive variable တွေကို (2016) ကိုဖြတ်ပြီးအသင်း - ပြသနာများသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (PSB) များမှအာရုံကြော - သိမြင်မှုဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများစွာကိုပြသခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ -
ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်း PSB နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ အသက်တာ၏ပိုဆိုးအရည်အသွေး, အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်အတော်ကြာမမှန်ဖြတ်ပြီး comorbidities မြင့်မားမှုနှုန်း။ ထို့ပြင် PSB အုပ်စုတစ်စုမော်တာတားစီး, Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတစ်ခုရှုထောင့်အပါအဝင်အများအပြား neurocognitive domains များ, ဖြတ်ပြီးလိုငွေပြမှုပြသခဲ့သည်။ ထို့ကွောငျ့ PSB အလယ်တန်းပြဿနာများဟာ host မှမြင့်တက်ပေးဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, အရက်မှီခိုခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါကနေအသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့် Self-လေးစားမှုအတွက်ယိုယွင်းပျက်စီးလာအထိ။
Zoophilic ရဲ့ Virtual ပတ်ဝန်းကျင် (2016) ပါဝင်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုများအတွက်စိတျရငျးတစ်ဦးကပဏာမမော်ဒယ် - ဒီလေ့လာမှုကိုဒီစာရင်းထဲမှာမပါသင့်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီမှာပါ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
တိရစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူယောက်ျား၏အွန်လိုင်းမှနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Inventory ၏ factorial တရားဝင်မှုအတည်ပြုဖို့, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အောက်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုများအတွက်တွန်းအားများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ပုံစံတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ဒီလေ့လာမှု: စိတ်ကျရောဂါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse နှင့်များ၏အစွမ်းသတ္တိကို တိရစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု။ ရလဒ်များညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Inventory ၏ 4-Factor မော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse အပြုသဘောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်း, စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုစုလျက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးအချက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse အပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။
ပြဿနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: အဆိုပါတဏှာ၏အခန်းကဏ္ဍ, အလိုဆန္ဒအတှေးအချေါမြားနှငျ့ metacognition (2017) - စာသားထဲတွင်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသော်လည်းဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအတွက်စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမေးခွန်းများ (အပျက်သဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုများ) အကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအလိုဆန္ဒစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ metacognitive မော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့် ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်စွဲလမ်းနှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်အလိုရှိကြသည်တွင်ဆက်စပ်သောအကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာထည့်သွင်းရန်တူညီမော်ဒယ်အပေါ်သို့တိုးချဲ့.
တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2017) - Rourkela အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျောင်းကသားသမီးများ၏ psychosomatic ကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကောက်နှုတ်ချက်:
ညစ်ညမ်းသိသိသာသာမြီးကောင်ပေါက်များတွင်အများအပြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်ဆွေမျိုးအတွေ့အကြုံများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကျက်ဖို့, သူတို့ပေးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအွန်လိုင်း၏များပြားလှသဘာဝလုပ်ဆောင်ပေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ.
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အထီးကျန်ခြင်း: တစ်ဦးက Bi-directional တဲ့ request ကိုမော်ဒယ်နှင့်ရှေ့ပြေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (2017) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သော scripting နှင့်စွဲလမ်းစေသောအလားအလာများအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်သီအိုရီအရ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေရလဒ်တွေကိုအားလုံးသုံးမော်ဒယ်များများအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်အကြားသိသာထင်ရှားသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များဖော်ပြခဲ့တယ်။ တွေ့ရှိချက်များကိုဖြစ်နိုင်သမျှအနာဂတ် bidirectional အဘို့အခိုင်ခိုင်လုံလုံ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်ဆန်ကြားရှိဆက်ဆံရေးတဲ့ request ကိုမော်ဒယ်ပေး။
Abstinence Preferences ကို (2016) ထင်သလောက်ဘယ်လို [ပဏာမရလဒ်တွေကို] - ဆောင်းပါးကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ပထမလှိုင်း၏ရလဒ်များ - main တွေ့ရှိချက်
အရှည်ဆုံး Streak သင်တန်းသားများ၏အရှည်စစ်တမ်းအချိန်ဦးစားပေးနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမီဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ abstinence ၏ရှည်ကာလဆုလာဘ်နှောင့်နှေးစေရန်သင်တန်းသားများကိုပိုပြီးတတ်နိုင်ဆပ်လျှင်ဒုတိယစစ်တမ်းမေးခွန်းဖြေဆိုမည်, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစိတ်ရှည်သင်တန်းသားများကိုကြာကြာအလင်းတန်းများဖြာဖျော်ဖြေဖို့ကပိုများပါတယ်လျှင်။
abstinence ၏ရှည်ကာလအရှိဆုံးဖွယ်ရှိ (ကောင်းမြတ်သောအရာသည်) လျော့နည်းအန္တရာယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယစစ်တမ်းနောက်ဆုံးသက်သေပြပေးသွားမှာပါ။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအလင်းတန်းများဖြာ၏အရှည်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဒုတိယလှိုင်း abstinence ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်လျှင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသြဇာလွှမ်းမိုးလျှင်အလင်းတန်းများဖြာ၏အရှည်အပြောင်းအလဲရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။
ဒုတိယလှိုင်း၏ရလဒ်များ - main တွေ့ရှိချက်
Abstinence လူတွေကိုပိုပြီး extroverted ပိုပြီးအသိစိတ်နှင့်လျော့နည်း neurotic ပြန်ဆို
အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းဂေးများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား (2017) အနက်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူကြည့်ရှုခြင်းလိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာနှင့်၎င်း၏အသင်းက - ကောက်နုတ်ချက်များ
ဂေးနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျား (GBM) သိသိသာသာပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ (SEM) လိင်ကွဲယောက်ျားထက်ကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့ပါပြီ။ SEM ပိုမိုပမာဏကြည့်ရှုပိုပြီးအပျက်သဘောခန္ဓာကိုယ်သဘောထားကိုမှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းအလိုငှါသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများအတူတူမော်ဒယ်အတွင်းကဤ variable တွေကိုဆန်းစစ်ပါပွီ။
SEM ပိုမိုစားသုံးမှုကိုတိုက်ရိုက်ပိုပြီးအပျက်သဘောခန္ဓာကိုယ်သဘောထားနှင့်နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန် symptomology နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သဘောထားကိုမှတဆင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန် symptomology အပေါ် SEM စားသုံးမှုသိသိသာသာသွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ပေါ်နှစ်ဦးစလုံး SEM ၏ဆက်စပ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အပျက်သဘောခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို GBM များအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါရလဒ်များအတွက်ကစားအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျားအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: ရောဂါလက္ခဏာတွေအစာစားခြင်းခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုနှင့်အတူအသင်း, ဟိုစတီရွိုက်နှင့်အသက် (2017) ၏အရည်အသွေးကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအတှေး - ကောက်နှုတ်ချက်:
သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တွင်နေထိုင် 2733 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျားတစ်နမူနာ, ရောဂါလက္ခဏာတွေအစာစားခြင်း, ဟိုစတီရွိုက်များနှင့်ဘဝ၏အရည်အသွေးအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအတှေးအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအစီအမံပါရှိသောကြောင့်အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်း, ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုပြီးစီးခဲ့သည်။ နီးပါးအားလုံး (98.2%) ပါဝင်သူများတစ်လလျှင် 5.33 နာရီတစ်ဦးပျမ်းမျှအသုံးပြုမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။
Multivariate ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြွက်သား, ခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့်အမြင့်နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်မကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်တိုးပွားလာကြောင်းထင်ရှားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး; သာ. ကြီးသောစားရောဂါလက္ခဏာတွေ; ဟိုစတီရွိုက်သုံးပြီးအကြောင်းပိုမိုမကြာခဏအတှေးအ; နှင့်အသက်တာ၏အနိမ့်အရည်အသွေးကို။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ (2017) နဲ့ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ Young ကသြစတြေးလျ '' အသုံးပြုမှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ပထမ ဦး ဆုံးအပြာစာပေကြည့်ရှုခြင်းကြည့်ရှုသည့်အသက်ငယ်သောအရွယ်မှာမကြာသေးမီကစိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အကြီးတန်းကောလိပ်အထီးကျောင်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ကျရောဂါ-စိုးရိမ်စိတ်-ဖိအား (2017) နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်စပ်မှုအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလက်ရှိအခြေအနေ - ကောက်နှုတ်ချက်:
ရည်ရွယ်ချက် - Chongqing ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များမှအထီးကျန်အမျိုးသားများအကြားလက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအခြေအနေကိုလေ့လာရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုကိုအပျက်သဘောခံစားချက်များနှင့်ဆန်းစစ်ရန်။
အဆိုပါဆောင်များတွင်ခုနှစ်တွင် 99.98% ကျောင်းသားများကိုညစ်ညမ်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထိတွေ့ဖူးခြင်း, သူတို့ထဲက 32.2% စွဲတဲ့သဘောထားကိုရှိခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါ၏အချိုးအစား 2.8 1 အချိန် / အပတ်ကထက်လျော့နည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသူဘာသာရပ်များအတွက်%, အထကျ ပို. 14.6 ကြိမ် / ရက်သတ္တပတ်၏တစ်ဦးအကြိမ်ရေနှင့်အတူရှိသူများအတွက် 3% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြီးတန်းကျောင်းသားများကအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု၏ဖြန့်ဖြူးအပြုသဘောညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအချိန်အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ, ကြာချိန်နှင့်စွဲဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းနေဆဲစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ရမှတ်များနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နားလည်မှုနှင့်ညစ်ညမ်း (2017) ကိုအသုံးပြုတဲ့သူကောလိပ်ကျောင်းသား၏အတန်းခန့်မှန်း - Porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းရလဒ်များအနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုရမှတ်များကိုဖော်ပြသောသင်တန်းသားများသည် Porn Abstainers နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Complex သို့မဟုတ် Auto-Erotic Porn User Classes တွင်အနိမ့်ဆုံးအလေးသာမှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Nelson et al သည်ထူးခြားသောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်။ (2010) သည်မြင့်မားသောမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ ယခုလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များသည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုကြောင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကိုသာကမ်းလှမ်းခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းပြချက်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖော်ပြ၍ မရပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည် ၄ ​​င်းတို့သည်အချို့သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းအတည်ပြုသည်။
ကျားခြားနားချက်, လူတန်းစားအဆင့်နှင့်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပေါ်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အထီးကျန်၏အခန်းကဏ္ဍကို (2017) - compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထီးကျန်ဆက်စပ်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြားသိသာထင်ရှားသောတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒါကပိုပြီးသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ predisposed နေကြတယ်, ပိုအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုစွဲဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု
ဒါဟာနောက်ထပ်အထီးကျန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြားသိသိသာသာတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကွောငျးကိုဖျောပွခဲ့သညျ။ ဒါကပိုပြီးအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားများကပိုသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူတွေသူတို့ကို predispose နိုင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်နှင့်သာအာရုံစိုနေကြတယ်, အထီးကျန်သို့မဟုတ်အထီးကျန်ခံစားရသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုအကျိုးဆက်များ (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစပိန်လူဦးရေရဲ့စားသုံးမှုအမျိုးအစား, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောစားသုံးမှုအတွက်အသုံးပြုအချိန်ကလူတစ်ဦးအပေါ်ဟာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုတစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျနှင့်ပင်ကိုယ်မူလအကြမ်းဖျင်းရရှိရန်ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မပါသောအခါစိုးရိမ်ပူပန်ထိခိုက်နေသည် အဲဒါကို access ကို။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုစပိန်အင်တာနက်အသုံးပြုသူ (N ကို = 2.408) ၏နမူနာရှိပါတယ်။ တစ်ဦး 8-item ကိုစစ်တမ်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အန္တရာယ်အကျိုးဆက်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအွန်လိုင်းမှပလက်ဖောင်းမှတဆင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ စပိန်တွင်လူဦးရေအကြားပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေရန်, စစ်တမ်းလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်မီဒီယာမှတဆင့်ရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါရလဒ်များသင်တန်းသားများ၏သုံးပုံတစ်ပုံမိသားစု, လူမှုရေး, ပညာရေးသို့မဟုတ်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များခံစားခဲ့ရဖူးကြောင်းပြသပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 33% အကျိုးကိုအဖြစ်ညစ်ညမ်း အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ချိတ်ဆက်5နာရီထက်ပိုမိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်သူတို့မချိတ်ဆက်နိုင်လျှင် 24% စိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်သုံး-Wave ကို longitudinal လေ့လာမှု (2018): အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီ-ခံနှင့်ဟောင်ကောင်တရုတ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မှ Exposure အကြားဆက်ဆံရေး - longitudinal လေ့လာမှုအရ porn အသုံးပြုမှုသည်စိတ်ကျခြင်း၊ ဘဝကျေနပ်မှုနှင့်ခွင့်ပြုထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
တွေးဆအမျှ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်နှင့်ယခင်လေ့လာမှုများ (ဥပမာ Ma et al 2018 ။ ။ Wolak et al 2007) နဲ့အညီခဲ့ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ။ , Self-လေးစားမှု (Apaolaza et ဤရလဒ်သည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ (;; Primack et al 2015 ။ Zhao နှင့် et al 2017 ။ Nesi နှင့် Prinstein 2017) အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာအပေါ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအပေါ်အတိတ်လေ့လာမှုများ, နှင့်အညီများမှာ ။ အယ်လ် 2013; ။ Valkenburg et al 2017), နှင့်အထီးကျန်ဆန် (Bonetti et al 2010; ။ Ma 2017) ။ ထို့အပြင် t ကိုမိမိအလေ့လာမှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစိတ်ကျရောဂါအပေါ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုပေးသည်။ ဒီအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစောစောရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအကြာတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါအကြံပြု ... ..
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားအနှုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးဟာအစောပိုင်းလေ့လာမှုများနှင့်အညီခဲ့ (ပေတရုနှင့် Valkenburg 2006; ။ Ma et al 2018; ။ Wolak et al 2007) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု Wave ကို2မှာသူတို့ဘဝအတွက်လျော့နည်းကျေနပ်မှုနေသောဆယ်ကျော်သက် Wave ကို3မှာညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများနှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့ကသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါပြသထားတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများအပေါ်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါနှင့် longitudinal သက်ရောက်မှုပြသထားတယ်။ ယခင်သုတေသန (; ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle 2006; Lo နှင့်ဝေ 2009 ပေတရုနှင့် Valkenburg 2006) မှမျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းလိင်အလိုလိုမြီးကောင်ပေါက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းနှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများမှထိတွေ့မှုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Escapist အတွက်ကျားကွာခြားချက်များလိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း၏အသုံးပြု: ဂျာမန်ဖြစ်တန်ရာကိန်းနမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ (2018) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဂျာမန်အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းအပေါ်ဆွဲ, ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ escapist လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ SEIM ကိုအသုံးပြုဖို့ကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အနိမ့်ဘဝကျေနပ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးမရှိခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခံစားချက်တွေကိုလူတို့တွင် SEIM သုံးပြီး၏ကြိမ်နှုန်းခန့်မှန်းရန်ကူညီသည်။ အထီးကျန်ခြင်းထိုနည်းတူမိန်းမတကာတို့ထက် SEIM ၏စားသုံးမှုလှုံ့, သေးအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသိသာဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက် SEIM ၏စားသုံးမှုပင်ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်တိုးပွါးနှင့်အသက်ကိုအလိုမရှိခွအေနမြေားနှင့်အတူမကျေနပ်မှုထက်ဘဝကိုကျေနပ်အားရမှုတစ်ခုအလားတူအဆင့်မြင့်ဖော်ပြသည်။ ကျား, မလိုအပ်အဆောက်အဦများနှင့် SEIM ၏စားသုံးမှုအကြားဤအရပ်မှသိသိသာသာအလယ်အလတ်ဆက်သွယ်မှု။
အထက်ပါလေ့လာမှုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပိုမိုမြင့်မား porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းဆိုပါတယ် နှစ်ခုလုံး သာ။ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်ဘဝကိုပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်း။ အလွန်ထူးဆန်းတဲ့တွေ့ရှိချက်။ သုတေသနကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါ၊ အားလုံးသောစုံတွဲတွဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်ဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ် မှန်မှန် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံး။ အကြီးစား, တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်ဒေတာရှားပါးသော်လည်း, အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်းကဖော်ပြခဲ့သည် သာ 2.6% လက်ထပ်ပြီးသောအမျိုးသမီးများသည်လွန်ခဲ့သောလက“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်” သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းကိုသာ 2002 & 2004 ခုနှစ်တွင်မေးခဲ့သည် (ကြည့်ရှု ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014). အဆိုပါ takeaway ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု (သို့မဟုတ်အခြား variable တွေကို) အပေါ်အပြုသဘောသို့မဟုတ်ကြားနေသက်ရောက်မှုသတင်းပို့လေ့လာမှုများနေသောအမျိုးသမီး၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကနေဒီဆက်စပ်မှု deriving ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်: ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက် (1) ပုံမှန် porn သုံးစွဲသူများနှင့်, (2) (ဖြစ်ကောင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး၏ 3-5%) ။ သေးငယ်တဲ့နမူနာအတူကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်ပေါ်ပေါက်ဖို့ခညျြနှောငျနေကြသည်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုချက်, နှင့်စီးပွားပျက်ကပ် (2018) တို့အကြားအသင်းကိုနားလည်ခြင်း - ပို၍ ကြီးမားသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ် ၀ င်စားမှုမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ထို့ကြောင့်ပင်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်များ, Impulse, ညစ်ညမ်းလက်ခံမှုနှင့်ညစ်ညမ်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအထွေထွေအမြင်အမျိုးမျိုးများအတွက်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏စုဆောင်းစုစုပေါင်းကြည့်ရှုနေဆဲသိသိသာသာယခင်လေ့လာမှုများတှငျတှေ့အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအဆင့်မြင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကြည့်ရှုညစ်ညမ်းတသမတ်တည်းပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်စဉ်းစားသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုအကြံပြုသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုမှန်မှန်မဆိုအဝတ်အစားမပါဘဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရန်နှင့်ညစ်ညမ်းအတိုင်းဤမရိပ်မိခဲ့ဘူးတော်မှာလာသောအခါတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကပိုမိုမြင့်မားစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုမဟုတ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဖြစ်တို့အားဤသို့သောရုပ်ပုံများကိုယုံကြည်သောအခါပြောင်းပြန်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံစာများအောက်ပိုင်းဖြစ်တော်မှာ။
အထီးကျန်ခြင်းများအတွက်လျော်ကြေးနှင့်အစ္စရေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတွေထဲမှာလူမှုဆက်ဆံရေးကင်းမဲ့ခြင်း (2018) အဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အသုံးပြုမှု - သင်တန်းသားများကိုအသက်အရွယ်မရွေး 14-18 ခဲ့ကြသည်။ ကောက်နုတ်ချက်:
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုလည်းလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်မြင့်မားသည့်အထီးကျန်နှင့်မလုံခြုံသောပူးတွဲဖိုင်ကိုလမ်းကြောင်းမတူညီ (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်း) ၏ပျံ့နှံ့မှုမြင့်မား, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အင်တာနက်အမှောင်ခြမ်း: တိကျတဲ့အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူမှောင်မိုက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏အသင်းအဖွဲ့များများအတွက်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား (2018) - အွန်လိုင်းလေ့လာမှုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုသည်မှောင်မိုက်သောစရိုက်များ (machiavellianism, psychopathy, narcissism, sadism and spitefulness) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုလေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
မေးခွန်းမေးခွန်း - အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက် porn & gaming မပါဘဲဤစရိုက်များမည်သို့ကွာခြားမည်နည်း။
ဗိုလ်မှူးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အမျိုးသမီးခံယူ Labiaplasty (2018) ၏ Sociodemographic အင်္ဂါရပ်များ - ကောက်နှုတ်ချက်:
လူနာများ၏ထက်ဝက်သူတို့ကအမျိုးသမီးအင်္ဂါဟု (50.7%) အကြောင်းကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရှိခဲ့ကြပြီးမီဒီယာ (47.9%) မှတဆင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံ။ သူတို့၏အမျိုးအအများစု (71.8%) သူတို့ကပုံမှန်မအင်္ဂါနှင့်6months ago ထက်စဉ်းစား labiaplasty ပိုပြီး (88.7%) ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှုန်းမှာ 19.7% နှင့်သိသိသာသာနိမ့်လိင်အင်္ဂါ Self-image နဲ့ Self-လေးစားမှုနှင့်အတူ related ခဲ့သည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာသုံးပြီးလူငယ်များ (2018) ၏ self-အကဲဖြတ် - ပိုလန်မှဘာသာပြန်ထားသော
အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့သူလူငယ်များကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်လဤအကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုသောလူငယ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိယေဘုယျ Self-အကဲဖြတ်ရှိသည်။ ဤသည်ကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုသင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သင့်ကိုယ်သင်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းအသိအကြောင်းကိုပိုကောင်းတဲ့အမြင်သို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။
ခေါ်ဆောင်သွားက်ဘ်ဆိုက်များကိုမသုံးကြဘူးတဲ့သူကျောင်းသားများ, အတွေ့အကြုံပိုပြီးလူမှုရေးထောက်ပံ့မှုကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ခေါ်ဆောင်သွား content များအတွက်ရောက်ရှိထက်ပိုချစ်ရသူနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများကလက်ခံခံစားရတယ်။ ဒါကသူတို့အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးသူတို့ရဲ့ပိုပြီးအကောင်းမြင်အကဲဖြတ်သို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။
ခေါ်ဆောင်သွားသောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးမပြုတဲ့သူဘာသာရပ်များအုပ်စုကိုသုံးနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏခေါ်ဆောင်သွားက်ဘ်ဆိုက်များကနေအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်လသုံးပါနှင့်အတူအဘယ်သူလေးကနေသူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းထက် Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်သဘောမျိုးရှိသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကဒါဟာသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဇွဲနှင့်စည်းကမ်းကိုကျော် သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ရဲ့ဘာသာပြန်ပေးသည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ erotica အားဖြင့်ကဝိုင်းပယ်ထားခဲ့ test ဘာသာရပ်များတွင်လည်းသုတေသနအခြားသင်တန်းသားများကိုထက်ဝိသေသလက္ခဏာပေါင်းစည်းမှုမြင့်မားအဆင့်အထိသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ဤသည်ကို "ငါ" နှင့် သာ. ပြည်တွင်းရေးအဆောက်အဦများဆက်လက်ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်များ၏ပိုပြီးရင့်ကျက်အဆောက်အဦများကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
ပါးလွှာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ဖို့အထီးမိတ်ဖက်ဖိအားသဘောထားအမြင်: အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေမယ့်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင်ရောဂါ symptomatology အစာစားခြင်းနှင့်အတူအသင်း (2019) - ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူအမျိုးသမီး၏မိတ်ဖက်အပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာပါ။
ယခုလေ့လာမှုတွင်အမျိုးသမီး၏ ED လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုယူဆထားသည့်မိတ်ဖက် - သတ်သတ်မှတ်မှတ် variable များကိုလေ့လာခဲ့သည် - ရူပီးမှမိတ်ဖက်ပါးလွှာမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖိအားများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း။
လက်ရှိနှင့်ယခင်မိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသော ED ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အသက်အရွယ်အလိုက်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဤအသုံးပြုမှုကြောင့်နှောင့်ယှက်ခံရခြင်းခံရသည့်အမျိုးသမီးများ၏အစီရင်ခံစာများဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်ပါးလွှာမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖိအားနှင့်ယခင်မိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတို့ကို ED symptomatology နှင့်တိုက်ရိုက်ရောပါးလွှာသောစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံတကာမှတဆင့်ဆက်စပ်သည်။ လက်ရှိမိတ်ဖက်အပြာစာပေရုပ်ပုံကို ED symptomatology နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ယောက်ျား၏မိတ်ဖက်ပါးလွှာမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖိအားနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုအမျိုးသမီးများ၏ ED လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုသည်ထူးခြားသောအချက်များဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ပါးလွှာမှုကိုကိုယ်ပိုင်စံအဖြစ်တိုက်ရိုက်ထောက်ခံရန် (ဥပမာအားဖြင့် ၄ င်းတို့၏မိတ်ဖက်အသွင်အပြင်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်း) ဖြင့်သွယ်ဝိုက်။ လည်ပတ်စေနိုင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, Mood, နှောင်ကြိုးစတိုင်, Impulse နှင့်ကိုယ်ပိုင်လေးစားမှုကိုစှဲကျဘာ (2019) အတွက်ခန့်မှန်းအချက်များအဖြစ် - ကောက်နှုတ်ချက်:
145 ဘာသာရပ်များ၏နမူနာလေ့လာမှုပြီးစီး။ စွဲလမ်းစေကျဘာအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များ, ရှောင်ကြဉ်ပါပူးတွဲမှုစတိုင်နှင့်အထီးကျား၏အဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်သော်လည်းမ Impulse နှင့်အတူခဲ့သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းကျဘာအသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များစွဲလမ်းကျဘာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများကွဲပြားခြားနားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ခံစားချက်အကြားလင့်များ၏အရေးပါမှုကိုပြသသောအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူအရတော့ဖြစ်ပါတယ် [22,26]. ဤသည်တွေ့ရှိချက်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ဂိမ်းကစားအကြားအသင်းအဖွဲ့၏အခြားအစီရင်ခံစာများနှင့်အညီလည်းဖြစ်ပါတယ်  သို့မဟုတ်အင်တာနက်လောင်းကစားဝိုင်း  နှင့်စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များ။ ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့များ [စွဲလမ်းကျဘာမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပြုအမူကြောင်းအကြံပြု20,35,36,84] ။ အခြားသောအင်တာနက်စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အတိုင်းဤတွေ့ရှိချက် [အနေနဲ့သင့်လျော်တဲ့ရောဂါရှာဖွေမူဘောင်အကြောင်းကို, ထိုစကားစစ်ထိုးပွဲဖွင့်လှစ်16] နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့၏လုံလောက်သောနားလည်မှု .
စွဲလမ်းစေကျဘာ (အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလူ့အထီးကျန်မှုတွေနဲ့လျော့ချရေး) ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမှအလယ်တန်းပိုပြီးသိသာစိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့် psychopathological ဒုက္ခဆင်းရဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖွံ့ဖြိုးရေး, [ထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး86] ဤသို့နောက်ထပ်အလားအလာလေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
ငုပ်လျှိုးနေပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) ကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု profile များကိုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ပါ - များ၏ရေးသားမှု-up, ဒီ 2019 လေ့လာမှု လိုချင်သောအရာတွေအများကြီးထွက်ခွာမည်။ စာတမ်းအပြည့်အစုံမှဤနံပါတ် (၄) တွင်များစွာဖော်ပြထားသည်။ ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည် (၁) သဟဇာတဖြစ်သောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု (HSP) ၏ဆင်းရဲသောရမှတ်များနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။ (4) စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်အားထက်သန်မှု (OSP); (1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (SEXSAT); (2) ဘဝကျေနပ်မှု (LIFESAT) ။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်အားထက်သန်မှု၊ လိင်ကျေနပ်မှုနှင့်ဘဝကျေနပ်မှု (ညာဘက်အုပ်စု) ၏ရမှတ်နိမ့်ကျမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ ဤတိုင်းတာမှုအားလုံးတွင်အမြင့်ဆုံးရရှိသောအုပ်စုသည်ပြpornနာအနည်းဆုံး (အုပ်စုတစ်ခုမှဘယ်သို့) အသုံးပြုသည်။
စီးပွားရေးအတွက်မှန်သမျှအပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ညစ်ညမ်း၏နေရာအနှံ့သဘာဝပေးထားသောကျနော်တို့ကြည့်ညစ်ညမ်းအလုပ်မှာသိက္ခာမဲ့အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုလေ့လာတယျ။ တစ်ဦး approximates တစ်နမူနာကနေစစ်တမ်းဒေတာအသုံးပြုခြင်း အသက်အပိုင်းအခြား၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ်နမူနာကျနော်တို့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သိက္ခာမဲ့အပြုအမူရည်ရွယ်ပါသည်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုရှာပါ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အထောက်အထားများကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစစ်တမ်း-စားသုံးညစ်ညမ်းတစ်ဦးချင်းစီလျော့နည်းကျင့်ဝတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်အတည်ပြု။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်ကြောင့်တခြားသူတွေရဲ့လူဇာတ်ဖျက်ခြင်းကနေတိုးမြှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆဲပါကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းကျနော်တို့ကိုရှာပါ။ ပေါင်းလိုက်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုညစ်ညမ်းလောင်ဖို့ရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ဦးချင်းစီလျော့နည်း Ethics ပြုမူဖို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယာနျဘာသာတရားကို, ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်ကျော်အချိန်များထဲတွင်အဆိုပါဆက်ဆံရေးဆိုတာဘာလဲ (2019) - ရှည်လျားသောလေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လမ်းပေါ်တွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
အခြေခံမှာပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ3လအတွင်းမှာအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့, ပြီးတော့6လအတွင်းမှာပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်သတင်းပေးပို့သူကိုယောက်ျား။
Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးအဖြစ်အခြေခံမှာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ3လအတွင်းမှာအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမရ, အမျိုးသမီးများပိုမိုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမတိုင်မီ Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုယာယီစားပေးမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အခြေခံမှာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံသောမိန်းမတို့ကိုပိုပြီးသို့မဟုတ်3လအတွင်းမှာ Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိမဟုတ်ကြ, ဒါပေမယ့်3လအတွင်းမှာပိုမိုမြင့်မား Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောမိန်းမတို့6လအတွင်းမှာပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားတူပင်3လအတွင်းမှာအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအထီးအဘို့အ6လအတွင်းမှာပိုမိုမြင့်မားစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့် Narcissistic နှင့် Histrionic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorder စရိုက်လက္ခဏာအဆိုပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဓိကအားဖြင့်စာပေအတွက်သတိမမူ, ဒီလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏အမြိုးသမီးမြားရဲ့အသုံးပြုမှုကိုလွှမ်းမိုးအချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အထူးသညျဆငျးရဲချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်, စိတျပိုငျးဆိုငျရာစညျးမဉျြးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုလား၏သာလွန်အသိနှင့်အတူဆက်နွယ်နေညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါစရိုက်များစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
အကွိမျမြားစှာဆုတ်ယုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (အကျိုးစီးပွား, ညစ်ညမ်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် compulsive), narcissistic စရိုက်များနှင့် histrionic စရိုက်များကိုသိသိသာသာ nonverbal လိင်စိတ်နိုးထ, စိတ်ခံစားမှုခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်ပရိယာယ်၏အသုံးပြုမှုကို၎င်း, မူးယစ်၏ခေါင်းပုံဖြတ်ဟောကိန်းထုတ်ကြောင်းထင်ရှားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှ ညစ်ညမ်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့ nonverbal လိင်စိတ်နိုးထ၏သိသာထင်ရှားသောတစ်ဦးချင်းစီခန့်မှန်းခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်ပရိယာယ်ခဲ့သည်, histrionic စရိုက်များအဆိုပါမူးယစ်၏ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့သိသိသာသာတစ်ဦးချင်းစီခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်နေစဉ်။
ဆွစ်ဇာလန်လူငယ်များအကြားဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြandနာရှိသည့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုခြင်း - လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ၊ လိင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများ (၂၀၁၉၉) - အပျက်သဘောဆောင်သောစရိုက်လက္ခဏာအားလုံးနီးပါးသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (Cybersex Use သို့မဟုတ် CU) သို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသော porn use (FCU) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
အလုပ်မဖြစ်သောဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းဗျူဟာများနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်း မှလွဲ၍ အားလုံးသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလက္ခဏာများကိုသိသိသာသာ CU (Cybersex Use) နှင့် FCU (CU ၏ကြိမ်နှုန်း) နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အထူးသ, Self- အာရုံ, အပြုအမူ disengagement, Self- အပြစ်တင်, neuroticism- စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ကျူးကျော် - ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံသိသိသာသာ CU နှင့်ပိုမိုမြင့်မား FCU ၏အမြင့်အလေးသာမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, လူပေါင်းကောင်းသော CU ၏အနိမ့်အလေးသာမှုနှင့်အနိမ့် FCU နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသားများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာကြည့်ခြင်းကြည့်ရှုခြင်း - အရည်အသွေးလေ့လာမှု (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူလူကြီးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြexploreနာများကိုလေ့လာရန်ဤသုတေသနကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြexploreနာများကိုလေ့လာရန်တက္ကသိုလ်ယောက်ျားလေး ၂၅ ဦး နှင့်အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်၊ အဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြandနာများ၊ လူမှုရေးပြandနာများနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာများကိုထုတ်ပေးသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသည့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သူများနှင့်ကွဲပြားသလော။ (၂၀၂၀) - ၁၄-၁၈ ။ အလွန်အကျွံမကောင်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ porn အသုံးပြုခြင်း။ ကောက်နုတ်ချက်များ
အစ္စရေးမြီးကောင်ပေါက် (N= 2112; ယောက်ျားလေး ၇၈၈ ယောက်နှင့်မိန်းကလေး ၁,၃၂၄)၊M = 16.52, SD = 1.63), အွန်လိုင်းလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့။ ပါဝင်ဆင်နွှဲသူတစ် ဦး စီသည်အပြာအမိန့်များဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၊ လိင်နှင့်ဆက်နွယ်သောအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဝါဒ၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်ဆယ်ကျော်သက်များသည် (များသောအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တော်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှု) အများအားဖြင့်ယောက်ျားများ၊ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုများပြားသော narcissist များ၊ စိတ်ဖိအားများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်းများမလုပ်ရ၊ ဒေါင်လိုက်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်လည်းကောင်း၊
ဘဝ၌အပြာစာပေနှင့်ရည်ရွယ်ချက် - အလယ်အလတ်ရှိသောဖျန်ဖြေခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၂၀) - ပြUနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန် CPUI-9 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဘဝရည်ရွယ်ချက်နှင့် CPUI-9 အချက်များ (မဖြစ်မနေ၊ အားထုတ်မှုနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ) နှင့်ယေဘူယျ CPUI-total ရမှတ်များအကြားသိသာသောဆိုးကျိုးများဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရလဒ်များကိုသုတေသနယူဆချက်များကကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်လက်ရှိသုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဘဝရည်မှန်းချက်သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည် (García-Alandete et al, 2014; Glaw et al ။ , 2017; Kleftaras & Katsogianni, 2012; Marco et al ။ , 2015)၊ လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်အလုံးစုံသောဘဝ မကျေနပ်မှု (Frankl, 2006; Hart & Cary, 2014) ။
ဘာသာရေး၊ ဘာသာရေးပြ,နာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့၏ဆက်နွှယ်မှုကားအဘယ်နည်း။ (၂၀၂၀)
ကျွန်ုပ်တို့၏ခြောက်လကြာရှည်လေ့လာမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Turkprime.com မှအရွယ်ရောက်ပြီးသောနမူနာများကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဘာသာတရားသည်မိမိကိုယ်ကိုရိပ်မိသည့်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ.
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးအတွက်သုံးလတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်ခြောက်လတွင်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အမျိုးသားများအတွက်မူအခြေခံအားဖြင့်စိတ်ကျရောဂါသည်သုံးလတွင်မိမိကိုယ်ကိုပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ယောက်ျားများတွင်ပြonlineနာရှိသောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ - မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်သည်သီအိုရီပုံစံကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ အထီးကျန်မှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုနှစ်သက်သော OSAs အမျိုးအစားနှင့်၎င်းတို့၏စွဲလမ်းစေသောအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်တွေးဆနေကြသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အရဆိုလျှင်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကို OSAs ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသောကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (N = 209) ။ ရလဒ်များအရကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ခြင်းသည်အထီးကျန်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် OSAs နှစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအပြုသဘောဆောင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များရှာဖွေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤ OSA လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုသည်စွဲလမ်းစေသောအသုံးပြုမှုလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အသုံးပြုသူများအတွေ့အကြုံအားလေ့လာခြင်း - အရည်အသွေးလေ့လာမှု (၂၀၂၀) - သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ (ဤစာတမ်းသည်ကဏ္ both နှစ်ခုလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည်)
ပါဝင်သူများကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်းနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်များကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားခြင်း၊ လူအများစုကသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းကအိပ်စက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့်တစ်နေ့တာအတွင်းစိတ်ဓာတ်နည်းခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာမှု၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်အခြားသူများနှင့်သူတို့၏ထိတွေ့မှုအပေါ်သက်ရောက်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်ပုံရသည်။ သင်တန်းသားများစွာသည်အထီးကျန်ခြင်းနှင့်စိမ်းကားခြင်းခံစားချက်သာမကမိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်စွာအထီးကျန်ခြင်းခံစားချက်များကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်.
ပါဝင်သူများကလူမှုရေးနှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ သီးခြားအပြုအမူများနှင့်စိတ်ဓာတ်နိမ့်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများကြုံတွေ့ရကြောင်း ၄ င်းတို့သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ IP ကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ အဲဒါကငါ့ကိုအထီးကျန်စေတယ်၊ ​​စိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်၊ ​​ငါဂရုစိုက်တာတွေလုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုလျော့နည်းစေတယ်၊ အဲဒါကကျွန်မရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ အခြားတစ် ဦး ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ ဒါကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော့်ကို ၁၇-၁၈ နှစ်အရွယ်မှာစိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့တယ်။ ငါနှင့်အတူတစ်ချိန်လုံးဘာမှားနေမှန်းမသိဘူး ဒါပေမယ့်ငါနုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဘယ်လောက်အထီးကျန်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်နေခြင်းဟာသူနဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုပိုပိုပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ ” အောက်ပါပါ ၀ င်ဖြေဆိုသူသည် IP အသုံးပြုမှုနှင့်သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုလက္ခဏာများနှင့်သူမအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်သူ၏ရှုမြင်ပုံကိုအပျက်သဘောဆောင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုသံသယများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။.
ပါဝင်သူများက IP သုံးစွဲမှုတွင်နာရီပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီးနောက်သူတို့၏စိတ်အခြေအနေနှင့်ပုံမှန်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်သက်ရောက်နေသောအိပ်စက်ခြင်းသည်လျော့နည်းသွားသည်။ သင်တန်းသားများစွာကပုံမှန်နိုးထချိန်များတွင်စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့်“ အားမရှိ” ဟုခံစားရသည်။
အမှောင်ထုနှင့်ရိုးသားမှု - နှိမ့်ချခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပဏာမလေ့လာမှု - ကောက်နှုတ်ချက်:
ယခုဆောင်းပါးသည် Dark Triad (narcissism, Machiavellianism, psychopathy) နှင့်ရိုးသားမှု - နှိမ့်ချမှုစရိုက်လက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောတွန်းအားများနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့်ပဏာမလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်အပြုသဘောဆက်နွှယ်မှုရှိသည်။ ရိုးသားမှု - နှိမ့်ချမှုသည်ဤညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့အပြင်အချက်အလက်များအရဤဆက်ဆံရေးသည်အမျိုးသားများသာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများတွင်သာရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။
အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြAssessနာများကိုအကဲဖြတ်ရန်စကေးတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်:
လေ့လာမှုများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းသည်စွဲလမ်းခြင်းနှင့်တူကြောင်းပြသသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြissuesနာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်စွဲလမ်းမှုများရှိသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေများကိုကြည့်ရှုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြissuesနာများကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်ဒေသခံဌာနေကိရိယာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ယခုလေ့လာမှုသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြissuesနာများကိုအကဲဖြတ်ရန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏လူမှုရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုအတိုချုပ်ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြrelatedနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လူကြီးများတွင်စိတ်ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အသိပညာပေးရာတွင်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ပါကစ္စတန်၌, ငါတို့သိသည်အတိုင်း, ယခုအချိန်အထိဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်လေ့လာမှုမကောက်ယူနိုင်ဘူး။
နမူနာမျိုးစုံကို ဖြတ်၍ အပြာရုပ်ပုံစာပေအကျဉ်းချုပ်အတည်ပြုခြင်း (2020) - ကောက်နုတ်ချက်များ
ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း (PPU) အတွက်လက်ရှိပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်လွန်ခဲ့သောခြောက်လက PPU အကြောင်းမေးမြန်းသည့်အပိုင်းသုံးအတိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာ (BPS) ကိုတီထွင်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ကြိုတင်အလုပ်၏ထောက်ခံမှုအတွက်, BPS ရမှတ်များယေဘုယျစိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ခံစားချက်များကိုအစီအမံများနှင့်အတူအတန်အသင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်, ငါတို့သည်လည်း BPS ရမှတ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲခံစားမှု၏အစီအမံများနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများကျော်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု ဦး စားပေးအကြားအလယ်အလတ်ဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာမမှန်မှုများအတွက်သတိပေးခြင်းကိုအခြေခံသည့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတားဆီးရေးရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (၂၀၂၀) - ငါညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုသတိထားခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသော ntervention လေ့လာမှုက -
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သတိရခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်ပြန်လည်ရှင်သန်မှုကာကွယ်ခြင်း (MBRP) p ပြီးနောက်ပါဝင်သူများသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းတွင်အချိန်နည်းပါးစွာသုံးစွဲခဲ့ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်စွဲလမ်းမှု (OC) လက္ခဏာများကိုပြသခဲ့သည်။…။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် MBRP သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းတွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့် CSBD လူနာများအတွက်စိတ်သောကရောက်ခြင်းများကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ပါဝင်သူများသည်အသက် ၁၈ မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းကန ဦး စစ်ဆေးမှုကို အခြေခံ၍ ရရှိသောဆယ်ကျော်သက် ၆ ယောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာမှတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်များကဆယ်ကျော်သက်များသည်အင်တာနက်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုသိကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ခင်ခြင်းအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာများနှင့်အတူ။ သိမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူတို့၏စွဲလမ်းမှု - လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပေါ်သူတို့၏စွဲမက်စွဲမက်စေသောအတွေးများမှပြသည်။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းအဲဒီဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါမြင်ချင်ကြတာကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမြင်ကွင်းကိုမြင်ရလို့အိပ်ပျော်ခြင်းကိုခက်ခဲစေပါတယ်။ လိင်မှုကိစ္စတွင်လှုပ်ရှားလိုသည့်ဆန္ဒ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အလွန်စိတ်အားထက်သန်။ ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းနှင့်ဤမျှကြီးမားသောချစ်ခင်တွယ်တာမှုခံစားရရန်မျှော်လင့်ခြင်းတို့မှချစ်ခင်တွယ်တာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည်အခြားလူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုရန်အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပြီးလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်မှသူတို့ကိုယ်သူတို့ဆုတ်ခွာနိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း“ ပြန်လည်စတင်ခြင်း” အတွေ့အကြုံ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲဆိုခြင်းဖိုရမ် (၂၀၂၁) တွင် Abstinence ဂျာနယ်များ၏အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်) - အလွန်ကောင်းမွန်သောစက္ကူသည် rebooting အတွေ့အကြုံ ၁၀၀ ကျော်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များတွင်လူများကြုံတွေ့နေရသောအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောဝါဒဖြန့်ချိမှုအများစုနှင့်ဆန့်ကျင်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဘာသာရေး၊ သုတ်ရည်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအစွန်းရောက်သူများကဲ့သို့) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာရန်ကြိုးစားသည့်အမျိုးသားများတွင်စက္ကူတွင်သည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
တတိယ၊ fသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အချို့ (n = 31), abstinence သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှစွပ်စွဲရိပ်မိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအကျိုးဆက်များကိုသက်သာစေရန်အလိုဆန္ဒဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်စွမ်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ (ဥပမာ, "၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊" [050, 33 နှစ်] ။ " အချို့သောအသင်းဝင်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလည်းရိပ်မိကြသည်။ အချို့ကအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားသည်ဟူသောသဘောမျိုး (ဥပမာ - PMO) ကကျွန်ုပ်ကိုလူများအားစိတ်ဝင်စားမှုနည်းစေပြီး ပို၍ ရင်းနှီးစေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုစုပ်ယူခြင်း၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုပေးသည်။ နှင့် porn မှချွတ်လူရှုပ်ခြင်း "[050, 33 နှစ်]), အခြားသူများကမူသိသာထင်ရှားသောအခြားသူများ၊ မိသားစု ၀ င်များ၊ အထူးသဖြင့်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များနှင့်တိကျသောဆက်ဆံရေးများယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
အဖွဲ့ဝင်များစွာက၎င်းတို့သည် abstinence မှစွပ်စွဲထားသောအပြုသဘောဆောင်သောသိမြင်မှုနှင့်သက်ရောက်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ Tစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအပါအ ၀ င်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတိုးတက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးအများဆုံးအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (ဥပမာ, "ညစ်ညမ်းခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌စွမ်းအင်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊" [024, 21 နှစ်]) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကစိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးလာခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုများကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာခံစားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအသင်းဝင်အချို့ကရှုမြင်ကြသည်။ (ဥပမာ, "ငါသာနက်ရှိုင်းသောအဆင့်တွင် '' ခံစား '' ။ အလုပ်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတိတ်ကာလများ၌ကောင်းသောနှင့်ဆိုးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်" [019, 26 နှစ်]) ။ အချို့သူများအနေဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်သာမန်နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံများမှပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်စွမ်းတိုးပွားလာစေသည် (ဥပမာ၊ “ ငါ့ ဦး နှောက်ဟာစင်ကြယ်တဲ့အပျော်အပါးမဟုတ်တဲ့အရာတွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်တယ်။ စက္ကူရေးခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊" [024, 21 နှစ်]) ။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိအဖွဲ့ ၀ င်များကရှောင်ကြဉ်ခြင်းကာလအတွင်းအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။n = 16) အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုနှစ်ခု, 30-39 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (n = 7) နှင့်≥ 40 (n = 2) ။
မသင်မနေရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏နမူနာကိုလေ့လာခြင်း (၂၀၂၁) - ကောက်နုတ်ချက်များ
ထို့အပြင် ၁၇.၀၊ ၂၀.၄ နှင့်ကျောင်းသား ၁၃.၅% သည်ပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုအသီးသီးဖော်ပြခဲ့ကြပြီးလိင်မတူသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်နှစ်မျိုးလုံး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Exploratory Factor Analysis သည် mCIUS ပစ္စည်းများအတွက်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှု၊ မှီခိုမှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖော်ပြသည့်အချက်သုံးချက်နှင့် EmSS ပစ္စည်းများအတွက် interoceptive, impotent နှင့် extrinsic ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြထားသည်။ Regression analysis သည်လူ ဦး ရေစာရင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်လူမှုရေးချို့ယွင်းခြင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသောအခြားပြောင်းလဲမှုများသည်စိတ်ကျန်းမာရေးရလဒ်များကိုခန့်မှန်းဖော်ပြသည်။
နိဂုံး: ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအကြားအပြုအမူစွဲလမ်းမှုကိုထင်ဟပ်စေသောအပြုအမူများ၊ အင်တာနက်ကျောင်းသားများအကြားမကောင်းသောစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပံ့ပိုးမှုများကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ပါဝင်သူများကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်းနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်များကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားခြင်း၊ လူအများစုကသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းကအိပ်စက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့်တစ်နေ့တာအတွင်းစိတ်ဓာတ်နည်းခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာမှု၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်အခြားသူများနှင့်သူတို့၏ထိတွေ့မှုအပေါ်သက်ရောက်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်ပုံရသည်။
ပါဝင်သူများက“ ဦး နှောက်မြူ” ၏လက္ခဏာများ၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်လက္ခဏာများကဲ့သို့“ ADHD” ၏လက္ခဏာများကိုတွေ့ရသည်။ ပါ ၀ င်သူများစွာကအိမ်စာသို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလျော့နည်းသွားကြောင်းတင်ပြသူတစ် ဦး ကမှတ်ချက်ချသည်မှာပါဝင်သူများကမှတ်ချက်ချသည်မှာအိမ်စာသို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်ဆိုင်သောအလုပ်များကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်သိသာသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါ။ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ကသူ၏အိုင်ပီဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုသည်သူ၏အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်ပြီး၊စာဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအပါအ ၀ င်တာရှည်သောအလုပ်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်ကိုပျက်ပြားစေပါသည်။ " ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ကသူ၏အိုင်အက်စ်အသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို“လှုံ့ဆျောမှု, ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့် ဦး နှောက်မြူ၏မရှိခြင်း။ ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး / အရက်အလွဲသုံးစားမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဟာအဓိကအခန်းကဏ္playedကနေပါ ၀ င်ပေမဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ပြီးတဲ့အခါအခုငါဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုခံစားရတယ်” ဥပမာအားဖြင့်ဤသည်ကိုအခြားသင်တန်းသားများအားဖြင့်သံယောင်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များ။ ။ (၂၀၂၁) ကောလိပ်အမျိုးသားများနမူနာပုံစံဖြင့်မြစ်ဆုံပုံစံ၏မဏ္pillိုင်လေးခုကိုစမ်းသပ်ခြင်း - အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအပါအ ၀ င်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် ရန်လိုပုလ်, စိတ်, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျူးလွန်မှုနှင့်လျော့နည်းစာနာ
Baudrillardʾ သီအိုရီအရဘဝကျေနပ်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးနှင့်ကြေးနန်းရုပ်ရှင် Porno Movies တွင် Hyper အစစ်အမှန်မြင်တွေ့နိုင်သည့်လက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှု။ - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါ လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရှုသူများ၏အိပ်စက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘဝကျေနပ်မှုနှင့် ၅% အမှားအဆင့်တွင်သိသာသောကွဲပြားခြားနားမှုများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ The လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရှုသူများ၏ဘ ၀ သည်ကျေနပ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုသူများထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ဆိုက်ဘာလိင်သုံးစွဲမှုပုံစံများ၊ တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ယောက်ျားများအားလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်အကြားဆက်ဆံရေး (၂၀၂၁) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ရလဒ်များအနေဖြင့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုသုံးစွဲမှုပိုမိုမြင့်မားသောဘာသာရပ်များသည်စာရင်းအင်းအရအဆိုးမြင်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိသည်။ အထက်ပါဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယယူဆချက်သည်ဘရောင်း et al မှရရှိသောအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ (2016) နှင့်က Short et al ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးမှုမြင့်မားသောအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအဆင့်နိမ့်ကျကြောင်းတင်ပြသော။ အလားတူ Stewart နှင့် Szymanski (၂၀၁၂) မှလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏစားသုံးလေ့ရှိသောယောက်ျားလေးများပါ ၀ င်သည့်အမျိုးသမီးငယ်များအနေဖြင့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းတွင်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအထူးသဖြင့်အားနည်းစေသည်ဟူသောသီအိုရီကိုအားဖြည့်ပေးသည် (Voon et al ။ , 2012; Wérry et al ။ ) ။ , 2012) ။ ဒါဟာ cybersex စားသုံးမှုစဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များအားဖြင့်ကြုံတွေ့ dopamine လွှတ်ပေးရန် (Hilton & Watts, 2014; Love et al, 2015 ။ ), ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားတံခါးခုံတစ်ခုတိုးလာခြင်းဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ကိုတွေးဆဖြစ်ပါတယ်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလိမ့်မယ် သည်းခံမှုနှင့်အချို့သောဘာသာရပ်များတွင်စွဲလမ်းစေသည့် cybersex အသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့မှုနောက်ဆက်တွဲတိုးများမှု (Giordano et al ။ , 2011) ။
လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခြင်း - တစ် ဦး ကစေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (2021) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ရလဒ်များအရယူဆချက်အရလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတို့သည်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သို့သော်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အထီးကျန်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ ရလဒ်များအရလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခြင်းသည်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုယူဆရသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အထီးကျန်မှုကြားဆက်နွယ်မှုကိုအားနည်းစွာဖျန်ဖြေပေးသည်.
အီတလီလိင်တူချစ်သူများနှင့်အမျိုးသားနှစ်မျိုးလုံးတွင်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအပြာစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု - ဆက်ဆံရေး၏ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအခန်းကဏ္ ((၂၀၂၁) - အီတလီလိင်တူချစ်သူအမျိုးသား၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆင်းရဲသောသူများ၏ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှု၊ မြင့်မားသောစိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှုတို့နှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောဆက်ဆံရေးကိုမကျေနပ်မှု၊ မကောင်းသောကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုရင့်ကျက်သောပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသောသူများသည်လည်းပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆခဲ့သည်။ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုသည်ယောက်ျားကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္,ာန်၊ မိမိကိုယ်ကိုထင်မြင်သောပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့နှင့်ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကျရောဂါ၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများကပြselfနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ကြားခံစိတ်ကျေနပ်မှုကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်းစိတ်ကျရောဂါသည်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုပြceivedနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသားလူနာများနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ထိန်းချုပ်မှုများတွင် တွန်းအားဖြစ်စေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကို အွန်လိုင်းနှင့် အွန်လိုင်းမဟုတ်သော အွန်လိုင်းမဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များတွင် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (2022) - လိင်နှင့် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသူများကို ရှာဖွေသည့် ကုသမှုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ထိန်းချုပ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကောက်နုတ်ချက်-
ကျန်းမာသော ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ စမ်းသပ်အုပ်စုနှစ်ခုစလုံးသည် ပိုမိုမြင့်မားသော စိတ်ရောဂါဗေဒ၊ တိုင်းတာမှုအားလုံးတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့် CSB မြင့်မားမှုကို ပြသခဲ့သည်။... ။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လူနာများသည် အန္တရာယ်ပြုခြင်းမှ ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို ကျော်လွှားခြင်းတွင် ရမှတ်ပိုများပြီး မိမိကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် နိမ့်ကျသည်။ ဤအရာသည် ဤလူနာအမျိုးအစား၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသည့် ဆောင်းပါးအနည်းငယ်တွင် တွေ့ရသည်နှင့်အညီ၊52) မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ စိုးရိမ်သောကရောဂါများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည် (41) ။ ထိုမှတပါး, စိတ်အားထက်သန်မှု မြင့်မားခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဤကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည် အခြားသော အပြုအမူဆိုင်ရာ စွဲလမ်းမှုနှင့် ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုများတွင် တွေ့ရသည့် ပုံစံများနှင့် ဆင်တူသည်။
စာရင်းနှစ်ခု - ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲသောသိမြင်မှုရလဒ်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုရှာဖွေခြင်း -
အဆိုပါ ပထမဦးဆုံးအ3လေ့လာမှုများ နာတာရှည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်ထိတွေ့မှုကြောင့်လူတစ် ဦး ၏ဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသသည်။
အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ဆိုက်ဘာဆိုးသွမ်းအတွက်တိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု (2017) မှဦးစီးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသွေးဆောင် သာ. ကွီးမွတျမှ exposure - လေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ရလဒ် ၁ - ပိုမိုနောက်ကျသောလျှော့စျေးလျှော့ခြင်း (ဖြည့်ဆည်းမှုကိုမနှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း)၊ ၂) ဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတွင်ပိုမိုပါ ၀ င်မှု၊ ၃) အတုကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အကောင့်ကိုဖောက်ထွင်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အတူတူယူခြင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးအချို့သောအလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များကိုလျှော့ချနိုင်သည် (ချုပ်တည်းခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကောက်နှုတ်ချက် -
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆိုက်ဘာသက်ငယ်ပြစ်မှုအတွက်ယောက်ျားရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလျှော့ချများအတွက်နည်းဗျူဟာသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို; ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်၏မြှင့်တင်ရေးလျော့နည်းထိတွေ့မှုမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိရလဒ်တွေကိုယခင်ကထင်ထက်ဆိုက်ဘာစပေ့ထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏မြင့်ရရှိနိုင်မှုကိုပိုမိုနီးကပ်စွာယောက်ျားရဲ့ဆိုက်ဘာ-ဆိုးသွမ်းအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
(2015) ဝညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေး: လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ် - သင်တန်းသားများကိုသူတို့ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးကြနည်းနိုင်ခဲ့ကိုလောင်ကြောင်းပိုမိုညစ်ညမ်း။ ဒါကထူးခြားတဲ့လေ့လာမှုလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအ3ပတ် porn အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဆက်လက် porn အသုံးပြုမှုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် (ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးဖို့စွမ်းရည် prefrontal cortex တစ် function ကိုကြောင်းသတိပြုပါ) ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးပိုမိုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု (ပျမ်းမျှဘာသာရပ်အသက်အရွယ် 20) မှကောက်နုတ်ထားပါတယ်တဲ့နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်တာဝန်မှာမိမိတို့ရမှတ်များနှင့်အတူဘာသာရပ်များ '' ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်း:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုလေလေ၊ အနာဂတ်ဆုများသည် ပို၍ အကျိုးရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအနာဂတ်ဆုများကိုချက်ချင်းရရှိသည့်ဆုများထက်လျော့နည်းကြောင်းသူတို့ပိုမိုမြင်လာခဲ့သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ပိုမိုကြီးမားသောအနာဂတ်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်စွမ်းလျော့နည်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုသည်ပိုမိုများပြားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယပိုင်းတွင်သုတေသီများသည် ၄ ​​ပတ်အကြာတွင်လျှော့စျေးလျှော့ချခြင်းနှင့်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
porn အသုံးပြုမှုလျှင်တစ်ဦးကစက္ကန့်လေ့လာမှု (ပျမ်းမျှအသက် 19) အကဲဖြတ်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် အကြောင်းတရားများ လျော့စျေး, ဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒပြည့်ဆိုင်းငံ့ထားရန်နိုင်ခြင်းနှောင့်နှေး။ သုတေသီများခှဲဝေ လက်ရှိ porn အသုံးပြုသူများသည် အုပ်စုနှစ်စုသို့:
သင်တန်းသားများကိုအားလုံးလေ့လာမှုမှာချုပ်တည်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားတာ ၀ န်ပေးအပ်ထားသောလှုပ်ရှားမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကျပန်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပါးနပ်သောအပိုင်းတစ်ခုမှာသုတေသီများသည်ဒုတိယအကြိမ်အုပ်စုအသုံးပြုသူများအကြိုက်ဆုံးအစာကိုမစားရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁) မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းရန်တာဝန်ယူထားသောဘာသာရပ်များအားလုံး၊ (၂) ဒုတိယ A ုပ်စု၏ညစ်ညမ်းမှု A သုံးပြုခြင်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။ ၃ ပတ်အပြီးတွင်သင်တန်းသားများသည်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့စျေးကိုအကဲဖြတ်ရန်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။ အရေးကြီးမှတ်ချက် -“ ညစ်ညမ်းသောအစာကိုရှောင်ခြင်းအုပ်စု” သည်“ အကြိုက်ဆုံးအစာရှောင်သူများ” ထက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်ဟုဆိုသော်လည်းအများစုသည်ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ရလဒ်များ:
3 ပတ်ကြာကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုလျှော့ချသောအုပ်စုသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအစားအစာမှရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှောင်ကြဉ်သောအဖွဲ့များထက်လျော့နည်းမှုနှေးကွေးမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ခြင်းကညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအားဆန္ဒပြည့်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ လေ့လာမှုမှ
ထို့ကြောင့်လေ့လာမှု 1 ၏ longitudinal တွေ့ရှိချက်အပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းကျနော်တို့ဆက်လက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှောင့်နှေးလျှော့တဲ့ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရန်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်ဒိုမိန်းအတွက် Self-ထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့်ခန်း (တဦးတည်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာစားသုံးခြင်းဥပမာ) အခြားကြိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ကိုကျော် Self-ထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းထက်နှောင့်နှေးလျှော့အပေါ်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (2008) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်နှောင့်နှေးလျှော့ - ကောက်နှုတ်ချက်:
Intertemporal ရွေးချယ်မှုအတွက်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပယောဂ Generalized စိတျမရှညျ - မဟုတ် porn, ဒါပေမယ့်အလားတူရလဒ်များသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ငွေကြေးဆုများအကြားကာလကြာရှည်စွာရွေးချယ်ခြင်းကိုပိုမိုစိတ်မရှည်နိုင်ကြောင်းပြသသည်။ အထွေထွေဆုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်၏အခန်းကဏ္ကိုမီးမောင်းထိုးပြရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထိခိုက်မခံသောဆုလာဘ်စနစ်ရှိသူများသည်လိင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ငွေကြေးမဟုတ်သောဆုလာဘ်များသို့ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်ကိုပြသသည်။
[ဤစာမျက်နှာကိုဤစာမျက်နှာ၏ပထမအပိုင်းတွင်လည်းတွေ့ရပြီး၎င်း၏“ နှောင့်နှေးလျှော့စျေး” တွေ့ရှိချက်ကြောင့်ဤနေရာတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြထားသည်။ ] Abstinence Preferences ကို (2016) ထင်သလောက်ဘယ်လို [ပဏာမရလဒ်တွေကို] - ဆောင်းပါးကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုခြင်းလောင်းကစားဝိုင်းဆုံးရှုံးမှုလျော့ကျဇီဝကမ္မ arousal တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ကြောငျးမှာသူတို့ရဲ့သင်္ချာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်သောအိမ်မှာကျောင်းသားများအတွက် '' ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းကိုလား? (2008) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဒါ့အပြင်ကျောင်းသားများကို '' မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်အပြုသဘောသင်္ချာမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ကျောင်းသားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, စောင့်ကြည့်ထိတ်လန့်, action ကို, ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်အောက်ပိုင်းစမ်းသပ်မှုရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ယောက်ျားတစ်ဦးလူနာနှင့်ရပ်ရွာနမူနာများတွင်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့် hypersexual အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် self-အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှု (2010) - "Hypersexual အပြုအမူ" (prefrontal cortex မှအဓိကအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်) ပိုမိုဆင်းရဲသောအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
hypersexual အပြုအမူများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာများမကြာခဏ Impulse, သိမြင်မာကျောမှု, ဆင်းရဲသားကိုတရားသဖြင့်စီရင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်လိုငွေပြမှုနှင့်လိင်နှင့်အတူအလွန်အကျွံအတွက်အဆက်မပြတ်၏အင်္ဂါရပ်များပြ။ ဤအသွင်ပြင်လက္ခဏာများအချို့သည်လည်းအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောရောဂါဗေဒနှင့်အတူတင်ပြလူနာအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်လက်ရှိ hypersexual လူနာအုပ်စုတစ်စုအကြားခြားနားချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (ဎ = 87) မှဦးဆောင်နှင့် non-hypersexual အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာ (ဎ = 92) အလုပ်အမှုဆောင်ရာထူးအမည်-အရွယ်ရောက်ဗားရှင်း၏အပြုအမူခဲ့သည် Rating Inventory သုံးပြီးယောက်ျား၏။
Hypersexual အပြုအမူအပြုသဘောအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်အတိုချုပ်-တစ်ဦး၏အတော်ကြာ subscales ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု hypersexual အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆထောက်ပံ့ပဏာမသက်သေအထောက်အထားသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည် (2013) နဲ့နှောင့်ယှက် - ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအင်တာနက်ကို erotica အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်လျော့နည်းနိုင်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီညစ်ညမ်း-ပုံရိပ်စမ်းသပ်မှုများတွင် 28 ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်းခဲ့တစျခုသောအပုံ4ကွဲပြားခြားနားသောအစုံ, ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်-မှတ်ဉာဏ်တာဝန်များကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုလည်းလိင်စိတ်နိုးထနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြိုတင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှု, ပြီးနောက်တိုကျတှနျးထားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ဟာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ပိုမို arousal ကို drop လုပ်ခဲ့ပြီးကြောင်းကိုပြသသည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ရလဒ်များကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့မှလိင်စိတ်နိုးထ၏ညွှန်းကိန်းများအလုပ်မလုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်သောမြင်ကွင်းကိုမှကူညီသည်။ စွဲ-related တွေကိုအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ရောက်စွက်ဖက်အလုပ်လုပ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုရာမှလူသိများသောကွောငျ့တွေ့ရှိချက်အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးမြောက်ရန် (သို့) စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်သတင်းအချက်အလက်များကိုစိတ်ထဲထားရှိခြင်းသည်။ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုစိတ်ထဲစွဲမှတ်အောင်ကူညီပေးတယ်၊ အာရုံပျံ့လွင့်စေတဲ့အရာတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ပြီးထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုများကိုတားဆီးပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်ယူခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ် ဦး ကတသမတ်တည်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်စွဲ -related တွေကို prefrontal cortex ၏ function ကိုဖြစ်သောအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, နှောင့်နှေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဆုံးဖြတ်ချက်-Making သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောလက်အောက်တွင်နှင့်အတူလိင်ရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (2013) - လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောသိမြင်မှုစမ်းသပ်မှုအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဤသည်က porn အသုံးပြုမှုသည်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီရန်ကူညီသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များဖြစ်သောအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဤကျွမ်းကျင်မှုများကို prefrontal cortex ဟုခေါ်သော ဦး နှောက်၏byရိယာကထိန်းချုပ်သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
လိင်ပုံများအကျိုးရှိကုန်းပတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည့်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဖြစ်စေသည်ကဒ်ကုန်းပတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည့်အခါဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထတာဝန်အခြေအနေနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းဆောင်ရည်အကြားဆက်ဆံရေးတည်းဖြတ်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်စိတ်နိုးထအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကျဘာအသုံးပြုမှုများ၏အခြေအနေတွင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရှင်းပြရသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
arousal အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များနှင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (2014) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဒီလေ့လာမှုကအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည် (WMC) ဇီဝကမ္မ arousal နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချကြားဆက်ဆံရေးတည်းဖြတ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ၎င်းတို့၏ဇီဝကမ္မ arousal အဆင့်ဆင့်အသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှုကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်စဉ် 59 ယောက်ျားတစ်ဦးစုစုပေါင်းလိင်ကွဲအပြန်အလှန်၏ 20 ကြည်ကြည်နှင့် 20 Non-ကြည်ကြည်ပုံရိပ်တွေရှုမြင်ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုလည်း WMC တစ်ဦးအကဲဖြတ်ကြပြီးပျမ်းမျှသြစတြေးလျအထီးအမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံမှနှုတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုခံတုန့်ပြန်အားလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာငြိမ်းမယ်လို့အရာမှာအမှတ်ဖော်ထုတ်ရန်ခဲ့သည့်အဘို့အရက်စွဲတစ်ခု-မုဒိမ်းမှု analogue တာဝန်ပြီးစီး။
ပိုပြီးဇီဝကမ္မခြင်းဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့် non-ကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ကြည့်ရှုအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့ကြသောသူသင်တန်းသားများကိုသိသိသာသာအကြာတွင်ရက်စွဲ-မုဒိမ်းမှု analogue တာဝန်အပေါ်ရမှတ်ရပ်တန့်အမည်စာရင်းတင်သွင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောကိန်းများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ဇီဝကမ္မ arousal နှင့်အမည်စာရင်းတင်သွင်းရပ်အမှတ်အကြားဆက်ဆံရေး WMC ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသင်တန်းသားများအဘို့အအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားတဲ့ WMC နှင့်အတူသင်တန်းသားများအဘို့, ဇီဝကမ္မ arousal အမည်စာရင်းတင်သွင်းရပ်အမှတ်မသက်ဆိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် (အထူးသနှင့် WMC) စွမ်းရည်ကို functioning အလုပ်အမှုဆောင်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ယောက်ျားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုစိစစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာသည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစောစောဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Boys ရဲ့ထိတွေ့: pubertal အချိန်ကိုက်အာရုံရှာနှင့်ပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2015) - (ကခြောက်လကာလအတွင်း) ဤရှားပါး longitudinal လေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းစေကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကောက်နုတ်ချက်:
ထို့အပြင်တစ်ဦး အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုခြောက်လအကြာမှာယောက်ျားလေးများ '' ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းသွားသည်။
ညစ်ညမ်းအတူ flyer တဲ့? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲ (2015) ၏ရောဂါလက္ခဏာမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည် - (အ prefrontal cortex ၏အောက်ရှိနေသော) အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာအလုပ်များကိုပိုပြီးညံ့ဖျင်းဖျော်ဖြေ porn စွဲဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့မြင့်မားတဲ့စိတ်သဘောထားနှင့်အတူကျအောကျခံ။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
ဆိုက်ဘာဆက်တင်စွဲမှုကို ဦး တည်တဲ့သဘောထားဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများပါဝင်တဲ့ multitasking အခြေအနေကိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုမှာပြcontrolနာတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်စုံပါ ၀ င်သည့်ပါရာဒိုင်းကို အသုံးပြု၍ ပါဝင်သူများသည်ကြားနေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုတူညီသောပမာဏနှင့်ညီမျှစွာအလုပ်လုပ်ရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောရည်မှန်းချက်ထားရှိခဲ့သည်။ [နှင့်] ကျနော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ဆိုက်ဘာလိင်စွဲလမ်းအပေါ်သဘောထားတွေကိုအစီရင်ခံသူသင်တန်းသားများကိုဒီရည်မှန်းချက်ကနေပိုမိုအားကောင်းသွေဖည်ကြောင်း။
ပြဿနာကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု functions များ, ပု prefrontal cortex ကကမကထပြုခဲ့ဆိုလိုသည်မှာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍဆီသို့ဦးတည်လက်ရှိလေ့လာမှုအချက်၏ရလဒ်များကို, (နေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2014) ။ အထူးသဖြင့်စားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့တစ်ဦးရည်မှန်းချက်လုံလောက်သောထုံးစံ၌ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုအကြားအကူးအပြောင်းတစ်ခုလျှော့ချနိုင်စွမ်းကိုကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တဦးတည်းယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်
ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လက်တွေ့အပြုအမူများနှင့် neurocognitive variable တွေကို (2016) ကိုဖြတ်ပြီးအသင်း - ပြသနာများသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (PSB) ရှိသူများသည်အာရုံကြော - သိမြင်မှုဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက ပို၍ ဆင်းရဲသည်ကိုပြသည် အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ဦးဖြစ်သော (hypofrontality) မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ် key ကိုဦးနှောက်အင်္ဂါရပ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေထဲကနေ, ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်သိမြင်လိုငွေပြမှုငှါ, PSB အတွက်ထင်ရှားပြဿနာတွေနဲ့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှု dysregulation အဖြစ်နောက်ထပ်လက်တွေ့ features တွေ, ခြေရာကောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်သည် ...။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာသိမြင်မှုပြဿနာများကိုအမှန်တကယ် PSB ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာလျှင်ဤမှတ်သားလောက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
အကြီးတန်း High School တွင်ကျောင်းသားများ, ဂါနာအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှုများ။ (2016) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လိင် compulsive နှင့် Non-လိင် compulsive အမျိုးသားများ၏အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံခြင်းမပြုမီကာခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယို (2017) အကဲခတ်ပြီးနောက် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သည့်ယောက်ျားများတွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုခံစားသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအလုပ်အမှုဆောင်ညံ့ဖျင်းသောအမှုဆောင်အရာရှိသည်ပစ္စည်းဥစ္စာမမှန်ခြင်း (နှစ်မျိုးလုံးကိုပြသည်) ပြောင်းလဲ prefrontal ဆားကစ် နှင့် ာင်း) ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤသည်တွေ့ရှိချက်လိင် compulsive သင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထိန်းချုပ်မှုများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွပြီးနောက်ပိုကောင်းသိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလိင် compulsive ယောက်ျားပိုကောင်းအပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံမှုနိုင်သောအတွေ့အကြုံကနေဖြစ်နိုင်ချေသင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အားသာချက်ယူမကျင့်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင် အဆိုပါလိင် compulsive အုပ်စုတစ်စုကသင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းသူတို့လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏သံသရာတွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ဆင်တူ, နှိုးဆွသောအခါအလွန်မကြာခဏအန္တရာယ်များအခြေအနေများမှထိတွေ့မှုနှငျ့ပတျသကျသောက, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏ activation ပြီးတော့အော်ဂဇင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှုတစ်ခုတိုးပွားလာပမာဏ, အတူစတင်သည်ရာ။
အသုံးပြုမှု, တဏှာနှင့်ပြဿနာအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အနုတ်စိတျလှုပျရှားမှု (2019) ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့် Duration: - ကောက်နှုတ်ချက်:
1,000 ကျော်တရုတ်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနမူနာတှငျကြှနျုပျတို့ညစ်ညမ်းတဏှာ OSAs ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန် OSAs ၏အသုံးပြုမှုများ၏အရေအတွက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာမှုများမှတဆင့်လည်ပတ်မယ်လို့စံပြစမ်းသပ်ပြီးနှင့် ဒီထို့နောက်အနုတ်လက္ခဏာပညာသင်နှစ်စိတ်ခံစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်အကြီးအကျယ်ထောက်ခံခဲ့သည်။
Results ပိုမိုမြင့်မားညစ်ညမ်းတဏှာ, OSAs ၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအရေအတွက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပိုပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောပညာရေးစိတ်ခံစားမှုပြဿနာ OSAs နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ။ ရလဒ်ကတခြားအပျက်သဘောဆောင်သောကျန်းမာရေးအစီအမံတွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့အတွက်ညစ်ညမ်းတဏှာ၏မြင့်မားသောအဆင့်သတင်းပို့ယခင်လေ့လာမှုများ၏သူတို့နှင့်အတူ resonate ။
Jos တက္ကသိုလ်, နိုင်ဂျီးရီးယား (2019) တွင်လူမှုလေ့လာရေး '' ကျောင်းသားများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ၏အမြင် - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလေ့လာမှုအဘို့မွေးစားသုတေသနဒီဇိုင်းစစ်တမ်းသုတေသနနှင့်လူဦးရေ Jos ၏တက္ကသိုလ်အတွက်တစ်ခုလုံးကိုလူမှုရေးဘာသာရပ်ကျောင်းသားများက 244 လူဦးရေအရွယ်အစားစုစုပေါင်းရှိခြင်းခံခဲ့ရခြင်းနှင့် 180 ကျပန်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရရာကနေကြီးလေးခုသုတေသနမေးခွန်းများကိုသဲနှင့်အတူနှစ်ဦးယူဆချက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခဲ့သည် အဆိုပါလေ့လာမှု၏နမူနာ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုညစ်ညမ်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူအများစုမှာကျောင်းသားများပညာရှင်တွေအတွက်ကောင်းစွာမဆုံးအကြိမ်ပင်သူတို့၏အကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်အခြိနျမဆှဲသောဖော်ပြခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-စွဲ Juvenile ဘာသာရပ်များအတွက်ချို့ယွင်းမကြာမီကနှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ် (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါ nonaddiction အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ယုတ်ခြားနားချက် (nonaddiction ရမှတ်၏ 6%) ၏ 1.80 အမှတ်အားဖြင့်, ညစ်ညမ်းစွဲအုပ်စုတွင်အနိမ့် RAVLT A13.36 ရမှတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ A6 (B1 အတွက်) ပြတ်တောက်ပြီးနောက်မကြာသေးမီမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်လျော့ကျလာမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုပြတော်မူ၏။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူ [24, 25] ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့လူသိများသည်, ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်း-စွဲ Juvenile အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပြဿနာရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မကြာသေးမီကတီထွင် ADHD ကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူဘာသာရပ်များဆန်းစစ်ထူးခြားတဲ့လေ့လာမှု။ အဆိုပါစာရေးဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြောင်းယုံကြည် ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့တူ ADHD: comorbidities နှင့် Self-အယူအဆ-related ဝိသေသလက္ခဏာများ (2018) နှင့်စပ်လျဉ်းကျန်းမာပြဿနာနှင့်စွဲကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြားလင့်များ။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုကနေတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီအင်တာနက်ကိုစွဲအတွက် ADHD ရောဂါအပြင်မကြာသေးမီကတီထွင် ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေများ၏သက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်အပါအဝင်အနည်းဆုံးကြိုးစားရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာခဲ့လို့။ ADHD နှင့်အတူသင်တန်းသားများအဖြစ်သာမကြာသေးမီကတီထွင် ADHD ကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူသူတို့အားဤအခြေအနေများဖြည့်ဆည်းမပေးခဲ့ပါဘူးသောသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာစွာမြင့်မားတဲ့တစ်သက်တာနှင့်လက်ရှိတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုပြင်းထန်မှုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကတီထွင် ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အတူစွဲသင်တန်းသားများကို (အစွဲအုပ်စု 30%) ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေမပါဘဲသူတို့အစွဲသင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့်တစ်သက်တာတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုပြင်းထန်မှုပြ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်စွဲနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည် (ADHD များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံကျေပွန်မပါဘဲ) မကြာသေးမီကတီထွင် ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြသည်။ ဒါကအလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ADHD မှာတွေ့ရှိသူတို့အားအလားတူသိမြင်လိုငွေပြမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့ပထမဦးဆုံးအအရိပ်အယောင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ။ Nie, Zhang က, Chen ကနဲ့ Li (၏မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု2016) ADHD နှင့်ကင်းသောဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်ကိုစွဲအစီရင်ခံအဖြစ်တစ်ဦးတည်း ADHD နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ် inhibitory ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှုနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသခဲ့သည်။
ဒါကယူဆချက် (အစစွဲလမ်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူများရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် ADHD ဝေဒနာရှင်အတွက် anterior cingulate cortex အတွက်လျှော့ချမီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆသတင်းပို့အချို့သောလေ့လာမှုတွေကထောက်ခံခံရဖို့ပုံရသည်Frodl & Skokauskas, 2012; Moreno-Alcazar et al ။ , 2016; ဝမ် et al ။ , 2015; Yuan et al ။ , 2011) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ကိုအတည်ပြုရန်, အင်တာနက်စွဲထဲမှာအလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစတင်ခြင်းနှင့် ADHD အကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်နေပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, longitudinal လေ့လာမှုများကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ရှင်းလင်းဖို့လျှောက်ထားရပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကအတည်ပြုနေတယ်ဆိုရင်, ဒီ ADHD ရဲ့ရောဂါရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Clinician သံသယ ADHD နှင့်အတူလူနာအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှစွဲလမ်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမှုများ၏အသေးစိတ်အကဲဖြတ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးသည်။
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ"
Pingback: Kanye West သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်ကြောင့်မှန်ကန်သနည်း
Pingback: အပြာစာပေသုံးစွဲမှု - သတိမထားမိသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြcrisisနာ TheHill - အခမဲ့ဂိမ်း Mods ကိုဒေါင်းလုပ်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု - သတိမမူသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြcrisisနာ TheHill - တောင်ကုန်း - TLO
Pingback: Meridian မဂ္ဂဇင်း၌ကောင်းကင်၌အခြားဘာသာမဲ့တစ်ယောက်ရှိသေးသည်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်ပုံများသည်သင်၏အံ့သြဖွယ်ဘ ၀ ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုမည်သို့ထိခိုက်စေနိုင်သနည်း
Pingback:3ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် Porn စွဲလမ်းမှု၏အံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - Prestige အမျိုးသားများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
Pingback: שמירתהברית - מידהטובה
Pingback: Gail Dines ကဲ့သို့သော ကျွမ်းကျင်သူများသည် ညစ်ညမ်းအပျက်အစီးများ မည်သို့နေထိုင်သည်ကို သတိပြုမိသော်လည်း အပြောင်းအလဲအတွက် မျှော်လင့်ချက်။
Pingback: Porn သည် သင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည် - BMS